Channel-Mandalay| Useless Humans
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ စွန်းစားခန်းတွေနဲ့ ဟာသ Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းလေးတကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဘရိုင်ယန် ဂျက်စ် လူးဝစ် နဲ့ အဲလက်စ်ဆိုပီး ကလေးဘဝထဲကခင်မင်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘရိုင်ယန်မွေးနေ့တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ပျော်ပါးကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ မတွေ့နိုင်ကြတော့ပဲ ဘရိုင်ယန်အသက်သုံးဆယ်ပြည့်မွေးနေ့မှ ပြန်ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘရိုင်ယန်နဲ့သူငယ်ချင်းတစ်စု သူ့မွေးနေ့ကို မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့မိသားစုပိုင်အိမ်မှာ ကျင်းပရင်းကနေ ကမ္ဘာပေါ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂြိုလ်သားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပါတော့တယ်။
ထိုဂြိုလ်သားရဲ့လက်ကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ဘလိုပြန်ကယ်တင်ကြမလဲ? ဂြိုလ်သားက အနိုင်ရမာလား သူတို့အနိုင်ရမှာလား? ဆိုတာတွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရီမောစရာစွန့်စားခန်း အက်ရှင်ခန်းလေးတွေနဲ့တင်ပြထားတာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ကားကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။